कला/साहित्य/सौन्दर्य खबर – Page3– rastriyakhabar.com
छालामा आएको परिवर्तनले बताउँछ तपाईंको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
यदि तपाईको छाला चम्किलो हुनुका साथै छालामा साथै गुलावी रंगको आकर्षक देखिन्छ भने तपाई धेरै स्वास्थ हुनुहुन्छ । तपाईं स्वास्थ हुनुका साथै आफ्नो छालाको पनि राम्रो ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । -यदि तपाईको छालामा चाया, दाग, रुखोपन आदि छ भने तपाईंको शरीरमा भिटामिन, क्याल्सियम,आयरन आदिको कमिका..
छालामा क्रिम लगाउँदा जीवन खतरामा पार्ने खालका स्वास्थ्य समस्या !
तपाईले छाला सेतो वा गोरो बनाउनका लागि क्रिमको प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ ? छ भने विचार गर्नुहोस् । यस्ता क्रिमहरुले रङ्ग मेट्ने वस्तु जस्तै काम गर्ने गरेको छन् । बेलायतको स्थानीय सरकारको सङ्घले विभिन्न ठाउँमा छापा मारेपछि प्राप्त विवरण र जानकारीका आधारमा त्यस्ता उत्पादनहरू “कुनै हालतमा प्रयोग..
वार्षिक छ अर्बको सौन्दर्यजन्य सामग्री आयात
काठमाडौं । सौन्दर्य तथा ‘कस्मेटिक’ व्यवसायका क्षेत्रमा वार्षिक करिब रु छ अर्बको सामग्री आयात हुने गरेको छ । आगामी मङ्सिर ५ देखि ८ गतेसम्म गर्न लागेको ‘हेल्थ एण्ड ब्युटी एक्स्पो’ का बारे जानकारी दिन ब्राण्डवर्थ प्राइभेट लिमिटेडले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी..
अहिले मुलुकभर डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । ५ हजारभन्दा बढी मानिस डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो। डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्छ। यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा..
आफ्ना कविता रुचाउने सबैप्रति राष्ट्रकविद्वारा कृतज्ञता
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले आफ्ना कविता रुचाउने सबै नेपालीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् । मंगलबार १०१ वर्ष पुगेका घिमिरेको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सबैलाई धन्यवाद दिएका हुन् । मस्र्याङ्दी वाङ्मय प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना गरेको १०१ औँ कार्यक्रममा..
डा. रंगीनाले जितिन एमएस नेपाल इन्टरनेसनल २०१९ को उपाधि
काठमाडौं । विवाहिता महिलाबीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता एमएस नेपाल इन्टरनेसनल–२०१९ को उपाधि डा. रंगीना लाइकमबम शाहले जितेकी छन्। उनले प्रतियोगितामा सहभागी सातै प्रदेशका ३६ जनालाई पछि पार्दै उपाधी हात पारेकी हुन्। नेपाल इन्टरनेसनल–२०१९ को उपाधि हात पारेकी डा. लाइकमबमले आगामी अक्टुबरमा सिंगापुरमा..
घ्युकुमारीलाई जुन रूपमा प्रयोग गरे पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ । यसको जेल बनाएर नियमित प्रयोग गर्दा छालाको सुन्दरता बढाउन सक्छ । त्यस्तै, यसलाई अन्य उपयोगी पदार्थ मिलाएर बनाएको फेस प्याक कस्तो फाइदा पुर्‍याउँछ जान्नुहोस् : काँक्रो – घ्युकुमारी प्याक : घ्युकुमारीलाई राम्ररी सफा गरेर यसको जेल..
मेकअपबिनाका ऐश्वर्य बच्चनका फोटो जसले प्रमाणित गर्छ मेकअपको पावर
मेकअपले मानिसलाइ अमुल परिवर्तन ल्याउने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ , मेकअपले बिना कुनै आर्टिस्टलाइ त चिन्न पनि गारो हुने गर्छ । मेकअप आर्टिस्टले नराम्रा मानिसलाई पनि एकदमै राम्रा बनाइ दिन्छन । मेकअप आर्टिस्टले यसरि मानिसलाई परिवर्तन गरिदिन्छन कि पहिला र अहिलेको फोटो हेर्दा चिन्नै गारो पर्ने गर्दछ..
काठमाडौँ । बरिष्ट भर्सटाइल गीतकार तथा सर्जक अम्बिका गुरुङको शब्दमा बाल गीत “हात्ती दाइ हात्ती दाइ” मा गुल्मीको अद्भुत कला भएकी मिठो स्वरकी धनि ६ बर्षे बालिका रबिना बसेलले आफ्नो जादुमय आवाज भरेकी छिन । बालबालिकाहरुको लागि भनेर रचिएको गीतलाई उनले आकर्षक ढंगले गाएकी थिइन् । यति सानो उमेरमा यस्तो..
रुपको चर्चा पाउने ‘ऐश्वर्या गर्ल’ दीपिकाका १० तस्वीर
काठमाडौं । चलचित्र ऐश्वर्याबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेकी अभिनेत्री दीपिका प्रसाईलाई सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीका रुपमा लिइन्छ । चलचित्र ऐश्वर्यामा उनले गरेको अभिनय भन्दा बढी उनको रुपको चर्चा चल्यो । उनलाई सम्भावना बोकेकी नायिकाको रुपमा दर्शकले अर्थ्याए । त्यसपछि उनी चलचित्र ‘छक्का पन्जा..
सुन्दर र आकर्षक बन्न अपनाउनुहोस् यी ८ तरिका
१. प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नाले शरीरका बिकार तत्व बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र त्वचा आकर्षक र सुन्दर बन्छ । २. अनुहार गर्दनका साथै हात खुट्टामा मस्चराइजर गर्नुहोस् यसले तपाइँको छालामा भएको चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्छ । ३. नियमित रुपमा सफा पानीले अनुहार धुने गर्नुपर्छ । दिनमा कम्तिमा ३ देखि चार..
पर्खाल भित्रबाट डिल्लु निस्कियो
रुपेश उप्रेती/अमेरिका। वाहिर होस् या भित्र पर्खाल आखिर पर्खाल हो । यसै कुरोको चुरोमा गडेर उत्तर अमेरिकाको सिन्सिनाटी राज्यमा गत साता एउटा गजल किर्ती लोकार्पण भयको छ जस्को नाम हो “पर्खाल भित्र” भुटानको साम्राङ गाउमा जन्मियर जिवनका सपना फुलाउने फलाउने र सजाउने अभिप्सासंगै सिन्सिनाटी पुगेका..
जेन्स सपिङको उत्कृष्ट गन्तब्य सिभिल मलको योङ्कर्स क्लोथिङ
काठमाडौँ । सबैलाई राम्रो, स्मार्ट, ह्यान्डसम बन्ने चाहना हुन्छ अनि सस्तोमा ब्राण्डेड कपडा, जुत्ताहरु लगाउने रहर पनि हुन्छ । जसको लागि सिभिल मलको दोस्रो तल्ला सप न. २२४ मा रहेको योङ्कर्स क्लोथिङ स्टोर्सले सबैको सपना साकार परेको छ । सेलिब्रेटी देखि सर्बसाधारणको भिड हुने उक्त सपमा हरेक ब्रान्डेड..
काठमाडौं । छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन बेलायतमा हुने भएको छ । आगमी अगष्ट ३ देखि ५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलन बेलायतको लन्डनमा हुने आयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) , बेलायतले जनाएको छ । नेपाली वाङ्मयलाई विश्वभर फैलाउनका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ..
लसुन र प्याजको फेसप्याकः घरैमा बनाउनुस् चम्किलो अनुहार
सफा, मुलायम, चम्किलो अनुहार कसरी बनाउने ? यसका अनेकौ काइदा छन् । घरेलु विधिबाट पनि अनुहारलाई चम्किलो र मुलायम बनाउन सकिन्छ । धेरैले अनुहारको सौन्दर्यका लागि बेसन, गुलाब जल, घिउकुमारी, बेसार, दूध, मह जस्ता घरेलु वस्तु उपयोग गर्ने गरेका छन् । यद्यपि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, प्याज र लसुनको प्रयोगबाट पनि..